Ɔsom ntamadan no (1-37)
Ɔsom ntamadan no ho ntama (1-14)
Ntamadan no nnua ne ne nnyinaso (15-30)
Ntwamutam ne nkataano no (31-37)
26 “Nwene ntama du fa yɛ ɔsom ntamadan+ no. Nneɛma a wode bɛyɛ saa ntama du no ne hama papa a wɔde yɛ nwera, hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ. Ma wɔnnwene kerubim+ wɔ ntama no biara mu. 2 Ma ntama no mu biara tenten nyɛ basafa* 28, na emu biara tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 4. Ɛsɛ sɛ ntama no nyinaa kɛse yɛ pɛ.+ 3 Keka ntama anum si anim ma baako ntoa baako so, na keka anum a aka no nso si anim ma baako ntoa baako so. 4 Afei fa hama bruu yɛ hankare toto ntama a wɔakeka asi anim no baako ano, na yɛ saa ara wɔ ntama a wɔakeka asi anim baako a aka no nso ano; ɛhɔ na wɔbɛka abien no abom. 5 Yɛ nhankare 50 wɔ ntama no baako ano, na yɛ 50 wɔ ntama a aka no nso ano; ɛhɔ na wɔbɛka abien no abom; enti baabi a nhankare no wɔ no bedi nhwɛanim. 6 Fa sika kɔkɔɔ yɛ nnade nketewa 50 fa suso ntama abien no mu na ɛmmom baako.+ 7 “Afei fa apɔnkye nwi+ yɛ ntama 11 a wode bɛkata ɔsom ntamadan no so.+ 8 Ma ntama no mu biara tenten nyɛ basafa 30, na emu biara tɛtrɛtɛ nyɛ basafa 4. Ma ntama 11 no nyinaa kɛse nyɛ pɛ. 9 Keka ntama anum si anim yɛ no ntama baako, na ka asia a aka no nso si anim yɛ no baako. Nea ɛto so asia no, bu to so abien wɔ ntamadan no anim. 10 Afei yɛ nhankare 50 toto ntama a wɔaka abom no baako ano, na yɛ 50 wɔ ntama a aka no nso ano; ɛhɔ na wɔbɛka abien no abom. 11 Fa kɔbere yɛ nnade nketewa 50 fa hyehyɛ nhankare no mu, na ka ntama abien no bom ma ɛnyɛ baako. 12 Ntama no fã a ɛbɛboro so no de, ma ɛnsensɛn hɔ. Ntama a ɛbɛka no, emu fã bɛsensɛn ɔsom ntamadan no akyi. 13 Ntama a ɛboro so no, ma emu basafa baako ngu ɔsom ntamadan no benkum na basafa baako nso ngu nifa, na ɛnkata n’afanu nyinaa. 14 “Afei fa adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ yɛ nkataso, na fa sukraman* nhoma nso yɛ nkataso foforo gu so.+ 15 “Paapae ɔkanto nnua fa sisi hɔ ma ɛnyɛ ɔsom ntamadan no nnua.+ 16 Ma nnua no biara tenten nyɛ basafa du na ne tɛtrɛtɛ nyɛ basafa baako ne fã. 17 Yɛ pɔw abien a ɛsa so wɔ nnua no biara ase. Nnua a mode besisi hɔ ama ɔsom ntamadan no, yɛ ne nyinaa saa ara. 18 Fa nnua no mu 20 sisi ɔsom ntamadan no fã a ɛhwɛ anaafo fam no. 19 “Afei fa dwetɛ yɛ nnyinaso+ 40 a wode nnua 20 no besisi so. Ntamadan nnua no biara benya pɔw abien, na wɔde nnyinaso abien bɛhyɛ baako ase, na wɔde abien abien ahyehyɛ nnua a aka no mu biara ase.+ 20 Fa nnua 20 nso sisi ɔsom ntamadan no fã noho a ɛhwɛ atifi fam no, 21 na fa dwetɛ yɛ nnyinaso 40 a nnua no besisi so. Ntamadan dua baako benya nnyinaso abien, na nnua a aka no mu biara nso benya nnyinaso abien. 22 Ɔsom ntamadan no akyi a ɛhwɛ atɔe fam no nso, wode nnua no asia besisi hɔ.+ 23 Wobɛyɛ ntamadan nnua no abien asisi ɔsom ntamadan no ntwea abien so wɔ akyi. 24 Ka bɔ so abien fi fam kosi soro ma enhyia wɔ baabi a kawa a edi kan no wɔ no. Saa ara na wobɛyɛ abien no nyinaa; ɛno na ɛbɛyɛ ntamadan no ntwea abien no. 25 Enti ɛbɛyɛ nnua awotwe ne dwetɛ nnyinaso 16; ntamadan dua baako benya nnyinaso abien wɔ ase, na nnua a aka no mu biara nso benya nnyinaso abien wɔ ase. 26 “Afei fa ɔkanto nnua yɛ mmeamu anum beabea ntamadan nnua no mu wɔ ɔfã baako,+ 27 fa mmeamu anum beabea nnua no mu wɔ ɔfã foforo, na fa mmeamu anum nso beabea ɔsom ntamadan no akyi a ɛhwɛ atɔe fam no. 28 Mmeamu a ɛwɔ ntamadan nnua no mfinimfini no de, ɛsɛ sɛ ɛtoam fi ti kosi ti. 29 “Fa sika kɔkɔɔ fa ntamadan nnua no ho,+ na fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa a mmeamu no bɛhyehyɛ mu no. Mmeamu no nso, fa sika kɔkɔɔ fa ho. 30 Ɔsom ntamadan no, yɛ no sɛnea mekyerɛɛ wo wɔ bepɔw no so no.+ 31 “Fa hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera yɛ ntwamutam,+ na wɔnnwene kerubim wom. 32 Afei fa ɔkanto yɛ adum anan na fa sika kɔkɔɔ fa ho, na fa ntwamutam no sɛn so. Fa sika kɔkɔɔ yɛ adum no ho nsusomu, na fa adum no sisi dwetɛ nnyinaso anan so. 33 Fa ntwamutam no sɛn nnade nketewa no ase na fa Adanse Adaka no+ si dan no mu. Ma ntwamutam no nkyɛ Kronkronbea+ no ne Kronkron Mu Kronkronbea+ no mu. 34 Fa mmuaso no kata Adanse Adaka no so wɔ Kronkron Mu Kronkronbea hɔ. 35 “Afei fa ɔpon no si ntwamutam no anim wɔ ɔsom ntamadan no atifi fam, na fa kaneadua+ no si anaafo fam. Ma ɔpon no ne kaneadua no nni nhwɛanim. 36 Fa hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nwene ntama* sɛn ntamadan no kwan ano.+ 37 Afei fa ɔkanto yɛ adum anum a wode ntama* no bɛsensɛn so; fa sika kɔkɔɔ fa adum no ho. Fa sika kɔkɔɔ yɛ ɛho nsusomu, na fa kɔbere yɛ nnyinaso anum a wode adum no besisi so.